Afrikaan u tartamaya madaxnimada FIFA - BBC Somali
Afrikaan u tartamaya madaxnimada FIFA
Musharax ka soo jeeda qaarada Africa ayaa sheegay in uu ku biiri doono tartanka loogu jiro cidda noqon doonta madaxwaynaha xiga ee FIFA.
Madaxa xariirka kubadda Cagta ee Liberia Musa Bility ayaa BBC-da u sheegay in uu u tartami doono xilka madaxtinimada Fifa.
Sepp Blatter oo hay'adda uu madaxda ka yahay ee FIFA ay baaritaan musuqmaasuq la xariira ay ku hayaan dalalka Siwzerlkand iyo Maraykanka ayaa sheegay in uu iska casilayo xilka maalma kadib markii la doortay.
Musa Bility oo markii labaad madax ka ah xariirka kubada cagta ee Liberia ayaa sheegay in la jooga wakhtigii qof afrikaan ah uu hogaamin lahaa xaririka kubadda cagta adduunka.
Balse ninkani ma ahan mushaharaxa ugu cadcad, taageero buuxdana ka hasyto guud ahaan qaaradda Afrika.
Waxay isku dhaceen guddiga xariirka kubadda cagta Africa kadib markii uu ka horyimid go'aamo muran dhaliyay oo uu qaatay madaxwaynaha muddada dheer maamulayay xiriirka kubadda cagta africa Cisa xayaatu.
Maadama uusan jirin illaa iyo hadda qof kale oo afrikaan oo uu damac ka galay tartanka FIFA, waxa uu go'aansaday in uu tartamo.
Wuxuu ku kalsoonyahay in uu heli doono taagerada ugu yaraan 5 wadan oo loo baahanyahay si uu qofku u noqda musharax.
Ciyaartooy hore oo u dhashay dalka Barazil Zico ayaa ah qofka kaliga ah ee kale ee ku dhawaaqay in uu u tartami doono xilka jagada ugu saraysa FIFA.
Labada ninba waxaa loo arki doonaa in ay yihiin kuwa ka yimid dibada FIFA oo doonaya in ay badalaan sepp Balatter oo sheegay in uu xilka ka tagi doono marka la doorto qofkii badali lahaa.
Balse taasi ma dhaboobi doonto ka hor bisha December ee snadkan.